Musqusha Guriga, Musqusha Darbiga Musqusha? Mise Musqusha Musqusha?
Bogga ugu weyn / blog / Musqusha Guriga, Musqusha Darbiga Musqusha? Mise Musqusha Musqusha?
2021 / 04 / 12 Qoondayntablog 5627 0
Dib u cusbooneysiintu waxay leedahay waxyaabo badan oo laga fekero, musqusha qaado, waxaa ku yaal musqusha darbiga iyo musqusha dheecaanka dhulka laba ikhtiyaar, haddaba sidee u dooran karnaa labadan? Maanta waxaan falanqeyn doonaa kala duwanaanshaha iyo faa iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka labada nooc ee musqulaha, si dhakhso leh si loo fahmo.
Waa maxay musqusha gidaarku?
Musqusha gudaheeda waxaa sidoo kale loogu yeeraa musqusha sudhan. Waxay ka kooban tahay haanta biyaha ee gidaarka gudihiisa iyo meel fadhiga ka baxsan. Tani waxay keydineysaa boos waxayna siineysaa dareen qaab suuliga ah, waxayna ku daraysaa hawo kacsan musqushayada.
Waa maxay musqusha gogosha dabaqa?
Musqusha gogosha dhulka ayaa ah nooca ugu badan ee musqusha ee aan leenahay, halkaas oo musqusha ay hoos ugu daadato. Bullaacadda dabaqa ayaa badanaa ah in musqusha kore iyo tuubooyinka bullaacadda ay ka soo maraan dabaqa, oo ay foorarsadaan saqafka hoose, ka dibna ay aadaan tuubbada bullaacadaha, taas oo ah tan aan inta badan isticmaalno hadda.
Faa'iidooyinka musqulaha derbiga ku jira
1 value Qiimo sare
Musqusha gudaha waxaa loo soo bandhigi karaa banaanka tuubada bulaacada ee aan fiicnayn si loo qariyo, mar dambe ma arki karto tuubooyin kala duwan, wanaajinta niyadda dadka, laakiin sidoo kale u oggolow booska markiiba inuu weynaado oo ballaadho.
2 、 Si fudud loo nadiifiyo
Dadka qaarkiis ee haysta nadaafad uurjiif, musqusha derbigu aad ayuu ugu habboon yahay. Ma leh wax dhib ah oo lagu nadiifiyo geeska dhintey, markaa musqusha aad ayey u fududahay in la nadiifiyo.
3 Ku habboon in la guuro
Haddii musqusha derbigu u baahan yahay inuu beddelo booskiisa, sidoo kale waa mid aad ugu habboon in la guuro, iyada oo aan wax xaddidaad ah lahayn.
4, Qaylada hooseysa
Guud ahaan marka la hadlayo, haanta biyaha ee musqulaha caadiga ah waxay si toos ah uguxiran yahiin godka, marka markaad musqusha dhaqayso, dhawaqa socodka biyaha waa mid aad uqurux badan, sawaxanna wuxuu saameyn ku yeelan karaa dadka kale. Musqusha gudaha waxay ku qarsoon tahay gidaarka maxaa yeelay haanta biyaha ayaa ku qarsoon gidaarka, sidaas darteed codka biyaha soo baxaya waa mid aad u yar.
Faa’iido darrooyinka musqulaha derbiga ku jira
1 、 Si fudud loo jabiyo
Qaybaha gudaha ee musqusha-derbiga si dhakhso ah ayey u waxyeeloobeen.
2, ow awoodda xamuulka qaada
Marka la eego awoodda xamuulka qaada ee musqusha, culeyska rarka ee musqusha safka derbiga ayaa ka hooseeya kan suuliga safka dabaqa ah.
3 pair Dayactir aan habooneyn
Aad uma dhib badna in la dayactiro, marka musqusha ay dhibaato dhacdo, dhib badan ayaa ku jirta in la dayactiro waana in darbiga la jaro.
Faa'iidooyinka musqusha hoose
1, buuqa biyo baxa waa yar yahay, ku dhowaad waxaa lagu magacaabi karaa aamusnaan.
2, qubeyska qubeyska ayaa ka xoog badan, si sahlan looga sifeeyo saxarada ku dheggan dusha sare ee musqusha, si aad ah u nadiifi, sidaa darteed suuliga wuxuu umuuqdaa mid nadiif ah sida cusub.
3, saamaynta urta ladagaalanka musqulaha kale ayaa kafiican, ka takhalus urta musqusha.
Faa’iido darrooyinka musqusha hoose ee bullaacadda
1 、 Markaad dhaqaysid, waa inaad biyaha dhigtaa meel aad u sareysa oo biyo ah ka hor intaadan saxaro ku nadiifin, oo guud ahaan isticmaal 8L ilaa 9L oo biyo ah si aad u gaarto ujeedada biyo raacinta, taas oo ah qashin biyo ah marka loo eego noocyada kale. musqulaha.
2 、 Dhexroorka dhuumaha bulaacadu waa qiyaastii 56 cm, haddii aad ku tuurto warqadda musqusha musqusha, maydhashada ayaa xireysa.
Hadday ahaan lahayd musqusha gidaarka ama musqusha qashin-qubka, waxaa jira faa'iidooyin iyo khasaarooyin, sida loo doorto xulashada gaarka ah ama waafaqsan caadooyinka shaqsiyeed ee la doorto, runti, waxay kuxirantahay waxyaabaha aad qiimeyso.
Hore:: Mowjadda Qabow Ayaa Mar Kale Dillaacday! Alaabada Musqusha, Sidee looga Hortagaa Qabowga? Next: Hal Musqul Ayaa Ku Filan, Maxaad Ugu Baahan Tahay Laba Musqulood Dalka Shiinaha?